"MERE" na oke firing nke ndị ọkwọ ụgbọ elu, "Mba" maka mmegbu ụlọ ọrụ
Home » Akụkọ banyere ọdụ ụgbọ elu » “MERE” ka oke ịchụpụ ndị ọkwọ ụgbọ elu, “M’A” na mmegbu ndị ọrụ ụlọ ọrụ
“MERE” ka oke ịchụpụ ndị ọkwọ ụgbọ elu, “M’A” na mmegbu ndị ọrụ ụlọ ọrụ
Star Alliance Member Avianca, nke dị na Colombia yiri ka ọ nwere nnukwu nsogbu na ndị ọkwọ ụgbọ elu na ikike ọrụ ha. Associationtù Ndị Ọdụ ụgbọelu Europe (ECA) - na-anọchi anya ihe karịrị 38.000 ndị ọkwọ ụgbọelu sitere na mba 37 dị na Europe - katọrọ nkụpụ nke ndị na-anya ụgbọelu na mmeghe nke usoro ịdọ aka na ntị megide ndị ọkwọ ụgbọ mmiri nke ndị Colombia Civil Airmen's Association (“ACDAC”) nke onye ọrụ ikuku nke Colombia bụ AVIANCA. . ECA na-akpọku AVIANCA ka ha kwụsị usoro ịdọ aka ná ntị ozugbo wee weghachite ndị ọkwọ ụgbọ ala ewepụrụ wee kpọọ gọọmentị Colombia ka ha hụ na ha zuru oke na Mgbakọ International Labour Organisation (ILO) yana OECD Corporate Governance ụkpụrụ.
Ebumnuche nke ụlọ ọrụ ahụ na mmachi ya nke atụ na nke na-ezighi ezi bụ ịtụ ndị obodo ahụ ụjọ ma si otú a gbochie mbọ ọ bụla iji chebe ikike ọrụ. Usoro ịdọ aka ná ntị na ịchụpụ na-abụ oke mmebi nke ikike ndị bụ isi nke ndị ọkwọ ụgbọ ala Colombia iji chebe ọdịmma ha ma nweta ọnọdụ ọrụ zuru oke.
Mmachibido iwu dị na Colombia na ndị ọkwọ ụgbọelu ikike iku abụbụ ndị megidere nkwa mba ụwa nke gọọmentị Colombia dị ka obodo mbinye aka na Nkwekọrịta 87 nke International Labour Organisation (ILO) nke gụnyere ikike ndị ọrụ itinye ọnụ na nkwekọrịta na iku ihe . Kọmitii ILO na Nnwere Onwe nke Mkpakọrịta agọnahụla na enwere ike ịhapụ ikuku ụgbọelu na oke mgbakọ a. Mmeghe nke usoro ịdọ aka na ntị na ịchụpụ ndị ọkwọ ụgbọ elu bụ mmachi iwu na ezighi ezi nke ikike ndị ọkwọ ụgbọ elu.
Omume AVIANCA megide ndị ọkwọ ụgbọ ala leghaara ụkpụrụ nke Gọọmenti Corporate nke oftù Na-ahụ Maka Njikọ na Ọha (OECD), otu nzukọ nke Colombia tinyegoro maka ndị otu. Dabere na nzukọ a, ụlọ ọrụ ga-amata ọdịmma nke ndị ọrụ ha iji hụ na ụlọ ọrụ ha na-eme nke ọma. Ọ bụrụ na Colombia na ụlọ ọrụ ya chọrọ ịbanye na OECD, ha ga-egosiputa na ha na-etinye ụkpụrụ nke ezigbo ọchịchị na-asọpụrụ ikike ndị bụ isi nke ndị ọkwọ ụgbọ ala ACDA.
Maka ebumnuche ndị a, ECA na-ezigara ndị ọrụ ibe ya na Colombia nkwado na ịdị n'otu niile ma na-agba gọọmentị Colombia na Avianca ume idozi mmebi nke ikike ndị bụ isi nke ndị ọkwọ ụgbọ elu ya, na-akwụsị usoro ịdọ aka ná ntị, na-agụghachi ndị ọkwọ ụgbọ ala a chụpụrụ ma bido ozugbo enwere ike ọhụụ. nzukọ iji nweta ezigbo nkwekọrịta ọrụ.
Njirimara abuo abuo na Cancun na Antigua
Mgbe nwanyị na enyí nwụsịrị, Dinokeng Reserve nwere ọtụtụ ihe ọ ga-aza
IGLTA na LGBTMPA gbakwụnyere nhatanha na World Tourism Network (WTN)
Sinopharm COVID ọgwụ mgbochi? Ndị mmadụ na Seychelles na-echegbu onwe ha, otu a kwa ka WHO
Effuel Mgbawa Nyocha: Effuel ECO OBD2 Ngwaọrụ Nchekwa Ewelitere
Ndị dọkịta India: Ikpuchi onwe gị na nsị ehi agaghị echekwa gị na COVID-19